10 Akanakisisa Webhu Kubhurawuza Mapurogiramu eiPhone: Akanakisa Alternatives kuSafari muna 2022 | la-manette.com
10 Akanakisisa Webhu Kubhurawuza Mapurogiramu e iPhone: Akanakisa Alternatives kuSafari
16 novembre 2021 ndima Anais Fontaine
Safari ndeimwe yeanokurumidza webhu browser kunze uko, asi iri kure nekukwana. Iyo inoshaya kukwezva kwekuona, uye akawanda maficha aripo mune chero webhu browser application kunze kweApple Safari.
Kuti uwedzere ruzivo rwemunhu, iwe une sarudzo yekurodha wechitatu-bato mapurogiramu. Iyo App Store ine matani esarudzo kana iwe uchida kudhawunirodha nyowani yewebhu yekubhurawuza app ye iPhone yako.
Kuti ikubatsire kusarudza yakanakisa browser ye iPhone, takaisa rondedzero, uye takaratidzawo maficha ega ega app. Nekudaro, haugone kushandura yako default web browser pa iPhone, uye ese ako eemail zvinongedzo uye zvinongedzo zvakagamuchirwa mumeseji zvicharamba zvakavhurwa muSafari. Asi iwe unogona kushandisa idzi dzimwe nzira dzeSafari kuita yako internet kubhurawuza ruzivo ruve nyore.
Usati watarisa maficha easati asarudzwa iPhone navigation apps, tarisa iyo 15 akanakisa manga maapplication eApple uye iPhone
10 akanakisa webhu kubhurawuza maapplication e iPhone
Dolphin Mobile Bhurawuza
1. Google Chrome -Yakanakisa yekufambisa app yekuchinjisa-chikuva kuwiriranisa
Google Chrome ndeimwe yeakanakisa nzira yekufambisa inowanikwa yeWindows zvishandiso uye Android. Google yakakurumbira browser inowanikwawo kune iOS zvishandiso. Iwe unogona kuwana ako achangobva kuvhurwa ma tabo, mabhukumaki uye anofarira pamidziyo yakasiyana nekusaina neID yako Gmail. Haisi kungozivikanwa nekuda kwerutsigiro rwayo rwemuchinjika-chikuva, asi inopawo musono kufamba.
Zvimiro zveGoogle Chrome
High-end cross-platform data synchronization.
Kukurumidza kuwana mapeji akashanyirwa kare.
Iyo kero bar inoshandawo sebhokisi rekutsvaga.
Peji yekumba inoratidza mapeji ako anowanzo kushanyirwa uye masaiti ane mukurumbira.
Google Chrome yeIOS inosanganisa zvinhu zvine simba kubva kuGoogle kuita kubhurawuza uye kubhurawuza paInternet kuti zvive nyore kushandisa. Ndiyo yakanakisa iPhone navigation app kune avo vanoda kushanda pane akawanda maturusi anoshanda pane akasiyana masisitimu anoshanda.
Verenga zvakare: Maitiro ekutsvaga uye kugadzirisa mapassword akachengetwa pa iPhone yako
2. Adblock 2.0 -Yakanakisa iPhone navigation app yekushambadzira-isina kubhurawuza
Chokwadi, shambadzo dzakapinda munyika yedu senhunzi. Kana iwe uri mumwe munhu asingade kuona zvinotsamwisa ads uchisevha internet, ipapo Adblock Browser 2.0 ndeimwe yeakanakisa kubhurawuza maapplication e iPhone. Iyo app's otomatiki yekuvhara ad inobvumidza iwe kushanyira mawebhusaiti uine rugare rwepfungwa. Iwe unogona kuwedzera kunze kana iwe uchida kuona zviziviso zveimwe peji rewebhu.
Zvimiro zveAdblock Browser 2.0
Yakanakisa ad blocking chimiro.
Unogona kudzima masocial media mabhatani anogona kuteedzera nzvimbo yako uye mudziyo.
Iyo ghost modhi inobvumidza iwe kusefa paInternet nenzira yakangwara.
Iwe unogona kusarudza iyo yakasarudzika yekutsvaga injini mubrowser application.
Adblock Browser 2.0 ndeimwe yeanonyanya kushanda browser maapplication e iPhone kana iwe uchida kuvharisa ads otomatiki. Zviri nyore kufamba-famba muapp, sezvo interface iri replica yeGoogle Chrome. Unogona kudhawunirodha iyi app yekufambisa mahara.
3. Firefox Focus - iPhone navigation app yekutarisa usingazivikanwe
Firefox harisi zita rinokatyamadza mune rondedzero yemabhurawuza. Firefox yedesktop yakaombererwa nevazhinji vanofarira tekinoroji nekuda kweseti yayo yepamberi. Firefox Focus haisi browser yakajairika; iapp inosimbisa kuvanzika. Iwe haufanire kumisa incognito modhi kuti utize stalkers; stealth mode inogara ichigoneswa mubrowser. Iyo inovhara zvinobudirira akawanda akajairwa webhu trackers pasina kupindirana nemaseti.
Verenga zvakare: Mashandisiro anoita iwo akasiyana mamodule ekukwezva muPokémon Go: Rain Lure, Ice Lure, Sparkling Lure, Magnetic Lure.
Zvimiro zveFirefox Focus
Nhoroondo yekubhurawuza inogona kucheneswa nekubata kamwe chete.
Iwe unogona kusarudza injini yekutsvaga kubva pane zvinopihwa mubrowser application.
Iwe unogona kuvharira dzinenge dzese marudzi ematracker neiyi app.
Firefox Focus ibasa rekutanga rine epamberi ekudzivirira kuvanzika maficha aunogona kunyatso edza kana uchitsvaga yakanakisa web browser ye iPhone. Kushaikwa kwematabo kunogona kutsamwisa dzimwe nguva, asi zvikasadaro iine tsika yekufambisa app ye iPhone kana iwe uchida kuvanza chitupa chako kubva online online.
Verenga zvakare: Maitiro eku dhawunirodha Procreate ye Android uye iPhone mahara.
4. Aloha - iPhone navigation app ine yakavakirwa-mukati VPN
Kana kuvanzika ndiko kunetseka kwako, hapana sarudzo iri nani pane kushandisa a VPN kutarisa paInternet. Aloha Browser ye iPhone ine yakavakirwa-mukati VPN iyo inokutendera kuti uongorore internet usingazivikanwe. Iyo iOS navigation app inotarisa pakuvanzika uye kuvanza vashandisi 'internet zvigunwe zvemunwe. Iyo interface yakatwasuka uye yakagadzirirwa kutora kurudziro kubva kuGoogle Chrome.
Zvimiro zveAloha Browser
Iyo app inobvumidza iwe kusefa pawebhu munzvimbo isina ad.
Iyo yakavakirwa-mukati VR inoridza inoita kuti iwe utambe VR mavhidhiyo zvakananga kubva kubrowser app.
Vhidhiyo inotamba kumashure kunyangwe iwe uchidzikisa browser app.
Aloha Browser ye iPhone inoti haitore chero chiitiko chinova chikonzero chikuru chekuisa korona sebrowser yakanakisa ye iPhone munyika ino ine nzara yedata. Iko kune zvakare yakabhadharwa vhezheni yebrowser, inonzi Aloha Premium, iyo inouya neyakatonyanya advanced feature set. Kune avo vane hanya nezve kuvanzika kwavo, Aloha Premium ndeimwe nzira yeSafari.
5. Puffin -Iyo inokurumidza kubhurawuza yewebhu app ye iPhone
Puffin Web Browser app inokurumidza kubhurawuza pawebhu app inosiyana kubva kune ese mamwe mabhurawuza pane iyi runyorwa. Iyo compression yeapp app inoshanda chaizvo, ichichengeta peji rekutakura nguva kusvika kushoma. Puffin web browser inotsigira Flash mapeji nekuti inosanganisira Adobe Flash. Iyo yazvino vhezheni yeapp ibhoni kune yakaderera bandwidth network sezvo ichideredza server yekubatanidza nguva.
Yakanakisa proprietary compression algorithm inomanikidza mapeji kuti akurumidze kurodha.
Chrome mabhukimaki anoyananiswa otomatiki muPuffin app.
Iwe unogona kugadzirisa kunaka kwerukova uye kugadzirisa kweiyomufananidzo yemapeji ewebhu.
Iyo Puffin navigation app ye iPhone ndeye avo vanoshanda pamidziyo ine mashoma zviwanikwa asi vanoda mapeji kurodha nekukurumidza. Iri maoko pasi imwe yeanokurumidza iOS mabhurawuza aunogona kurodha. Iine chaiyo trackpad uye yakatsaurirwa vhidhiyo inoridza, chishandiso chinopa vashandisi yakasarudzika yewebhu kubhurawuza ruzivo.
Verenga zvakare: Iyo 8 yakanakisa vhidhiyo yekugadzirisa software yeMac
6. Ghostery -Yakanakisa kuvanzika browser ye iPhone
Ghostery yakatanga seyekuteedzera blocker yekuwedzera. Browser yayo inopa ndeimwe yeakanakisa kuvanzika mabhurawuza eiOS zvishandiso. Kuchengetedzwa kwayo kwekuvanzika kunoshamisa uye kuvharisa maficha kwaita kuti izivikanwe nevashandisi vazhinji vanoda kusefa internet pasina matracker anovatevera pamasaiti ese. Iyo navigation app inokuzivisa iwe kana tracker ikaedza kukutevera pawebhu peji. Iwo ekutanga mabasa ebrowser application anoitwa zvisingaite nekushandisa.
Zvimiro zveGhostery Browser
Individual Tracker Control inokutendera kuti utarise ese matracker pamapeji ewebhu aunoshanyira.
Ese makuki uye cache anogona kucheneswa nekudzvanya kumwe chete.
Yakachengeteka basa rekutsvaga neDuckDuckGo.
Iyo wi-fi yekudzivirira ficha inobvumidza iwe kuvharira trackers kana mudziyo wako wakabatana kune imwe wi-fi.
Iyo Ghostery navigation app ndeye zvese zvekuvanzika uye inoita basa rinoshamisa rekukuchengetedza wakachengeteka kubva kune vanoteedzera. Iyi iPhone internet browser inofanirwa kuve neapp kune avo vane hanya nezvavo zvakavanzika.
7. Vadivelu Comedy Dolphin Mobile -A ficha-yakapfuma yekufambisa app ye iPhone
Iyo Dolphin Mobile Browser app ine akawanda maficha anoita kuti ive yakanaka imwe nzira yeSafari. Iyo tabbed yekubhurawuza inoita inokutendera iwe kuti uchinje nyore pakati pemaapplication.
Iyo app inorerutsa kufamba nema gestures, Dolphin Sonar, kumhanya dials, nezvimwe. Iwe unogona kusarudza kubva akati wandei madingindira kana iwe uchida kugadzirisa yako yekubhurawuza ruzivo. Iyo inokurumidza navigation application yekusevha pawebhu nenzira yakachengeteka uye yakasarudzika.
Zvimiro zveDolphin Mobile Browser
Dolphin Gestures inokutendera kuti ushanyire ako aunofarira mawebhusaiti nekungodhirowa tsika zviratidzo pachiratidziri.
Iyo navigation app yezwi rekutsvaga basa rakanyatsojeka, uye rinogona kukonzereswa nekungozunza zunza mudziyo.
Iwe unogona tweet uye kugovera mapeji ewebhu paFacebook uchishandisa yakazvitsaurira sarudzo muapp.
Nekumhanyisa dials, unogona kushanyira anowanzo kushanyirwa mawebhusaiti zviri nyore.
Iyo application inopa yakakura sarudzo yematema.
Dolphin Mobile ndeyemahara mobile navigation app uye imwe yeakanyanya-akapfuma iPhone mabhurawuza anowanikwa pamusika. Iyo ficha seti inoita kuti zviome kufunga, asi kana iwe uchinge wawana kureba kwayo, ine mukana wekuve waunofarira navigation app.
8. Yandex -Iyo iPhone navigation application yekurodha mapeji ewebhu nekukurumidza
Yandex injini yekutsvaga yakakurumbira yakapfuura Google muRussia. Yayo yekufambisa app ye iPhone inotarisa pane yakachengeteka uye yakachengeteka kubhurawuza. Inogona kuve yakanaka imwe nzira yeSafari kune avo vanoneta neinotonous chikamu cheiyo default iOS browser. Yandex yakaderedza kushandiswa kwedata uye nekumhanyisa nguva yekurodha peji neyayo yakakosha Turbo modhi. Ese mabasa ekutanga ebrowser app anowanikwa mune ino iOS browser app.
Zvimiro zveYandex browser
Inobvumira kutsvaga kwezwi mumitauro mitatu yese, inoti Russian, Turkish uye Ukrainian.
Yandex Zen chimiro chinopa zvemunhu zvemukati kune vashandisi mubrowser.
Iwe unogona kuseta kumashure kweiyo app peji peji.
Kuti urege kuona kushambadzira paunenge uchitsvaga paInternet, unogona kumisa ad blocker yakavakirwa mubrowser.
Verenga zvakare: Ekutanga gumi nemashanu ekurodha pasi paSwitch eShop yemwedzi waZvita 15.
Yandex yakazviitira zita muRussia, uko inopa kukwikwidza kwakasimba kuGoogle. Yandex browser ndeye yakadzikama yekufambisa app ine ese akakosha mabasa. Unogona kuirodha kuti uzorodze ruzivo rwako rwekubhurawuza uye shandura Safari.
9. Maxthon Cloud - A cloud-based iOS browser
Maxthon Cloud Web Browser app ye iPhone ibrowser yakareruka ine zvinhu zvinoshamisa senge yakavakirwa-mukati ad blocker, chishandiso chekutora manotsi, uye password maneja. Zvichienderana neinjini yegore, Maxthon inopa kugona kuyananisa data rako paApple uye isiri-Apple zvishandiso.
Zvimiro zveMaxthon Cloud web browser
Native ad blocker chimiro kuvharidzira zvinotsamwisa ads uye popups.
Husiku modhi yekutarisa paInternet husiku pasina kunetsa maziso.
Kugona kwekuisa edzedzero kuti uwedzere kugadzirwa kweiyo navigation application.
Maxthon Cloud Web Browser mukwikwidzi akasimba weakanakisa iOS yekubhurawuza app, ine akawanda epamberi maficha. Chandainyanya kufarira nezve app iyi kugona kuwiriranisa data pakati pemapuratifomu akasiyana uye yakavakirwa-mukati password maneja.
10. Opera kubata - iPhone browser ine yakabatanidzwa crypto wallet
Opera Bata iPhone browser Yekupedzisira pane yedu runyorwa rweakanakisa mabhurawuza e iPhone, Opera Bata ibhurawuza ichangoburwa inouya nenhamba yemhando yepamusoro senge yemuno ad blocker, yakavakirwa-mukati crypto wallet, uye inogonesa ficha. pop-ups uye makuki dialogs.
Kana uri kushandisa Opera Mini browser pane yako PC, iwe uchafara kunzwa kuti Opera Touch inowiriraniswa zvisina musono nemamwe mabhurawuza eOpera. Unogona kupinda muPC yako Opera browser nekungotarisa QR kodhi kubva kuOpera Touch app. Kana wangobatana, unogona kugovera mafaera uri kuenda.
Zvimiro zveOpera Bata browser ye iPhone
Dziviriro kubva kuvhavha ad uye cryptocurrency migodhi
Yakagadzirwa zviri nyore kushandisa mupfungwa
Kurumidza kuita bhatani kuti zviite nyore neruoko rumwe
Maitiro ekusarudza yakanakisa browser ye iPhone
Kubva pane iyi runyorwa, isu tinovimba kuti uchakwanisa kusarudza yakanakisa browser ye iPhone. Kusarudza yekufambisa application kunotsamira zvakanyanya pane zvaunofarira uye maitiro ekubhurawuza. Yakasiyana iPhone browsers inopa akasiyana seti yezvimiro. Vamwe vashandisi vanosarudza mapurogiramu anotarisa pane zvakavanzika, asi vamwe vanofarira kushandisa mapurogiramu anoderedza kushandiswa kwedata. Yese ye iPhone navigation apps yatataura pamusoro inogona kutorwa mahara kubva kuApple App Store.
Zuva, nguva nenzvimbo yekutepfenyura yechikamu 8 chemwaka wechitanhatu che "Supergirl"?
Netflix inotanga mitambo miviri mitsva yemafoni; 'Arcanium: The Rise of Akhan' uye 'Krispee Street'
Mafungiro: Iyi haisi hondo yekunyaradza, ihondo yemukati
Pokémon mutambo wekutengesa muna 2021 ndiwo akanakisa kune akateedzana kubva pakatangwa Goridhe neSilver
Nzira: Beatrice's Adventure mutambo unouya wesarudzo nemhedzisiro zvichienderana nehupenyu hwemusikana ane makore gumi nematanhatu, anowanikwa mukutanga kupinda paGoogle Play.
5G mutsara wendege: Zvifambiso zveUK zvinogona kubatwa mukupokana kweUS iyo yaisambofanira kunge yakasvika pakuvira | Nhau dzesainzi uye dzehunyanzvi